Ny kanto amin’ny fifampitohizan-drohy ao anatin’ny tantara Global Voices iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Jolay 2020 14:20 GMT
Ato amin'ny Global Voices, ny anjara asa fototry ny fifampitohizan-drohy dia ny fitahirzana ireo zava-misy lazainay. Amin'ny ampahany lehibe, miankina amin'ny vaovao azon'ny besinimaro antoka ny tantaranay. Noho izany, isaky ny avy aminà loharano iray, fa tsy avy aminareo mpanoratra ilay vaovao anatin'ny tantara arosontsika, tokony atolotra sy arahina rohy mankany izy ireny.
Tanjona roa no kendren'ny fifampitohizan-drohy: manome antoka ny fangaraharana sy ny fahazoan'ireo mpamaky hahatoky antsika, fa manampy ihany koa amin'ny fampidirana ny toe-javatra mahakasika ny lohahevitra iray na hampitodika ny mpamaky any amin'ny loharano maro hafa.
Na izany aza, mety hanelingelina ary hahatonga ny vakiteny hikorontana raha maro loatra ny rohy. Mety koa handiso ny mpamaky amin'ny loharanon-java-misy io, ary amin'ny alalan'ny fanentanana tsotra hoe “vakio ity mba hahafantarana bebe kokoa”.
Amin'ny maha mpanao gazety, ny fanomezana antoka sy loharano mazava no tokony hanahirana anao voalohany. Amin'ny ankapobeny, rohy iray — mankany amin'izay nitatitra ilay tantara voalohany indrindra, na ilay nitatitra izany tamin'ny fomba tsara indrindra — dia ampy mba hanondroana ny tompon'ny rohy. Ampiasao amin'ny tokony ho izy ireo rohy momba ny hevitra manodidina mba tsy hampanjavozavo ny loharanon'ny vaovaonao.
Iza no ampifandraisina
Makà mandrakariva rohy mankany amin'izay loharanombaovao voalohany indrindra araka izay tratra. Ohatra : raha toa ka mitanisa tarehimarika avy ao anatinà tatitry ny UNESCO ianao, manaova rohy mampifandray amin'ilay tatitra (amin'ny ankapobeny pdf), fa mankany amin'ny haino aman-jery izay namokatra lahatsoratra mikasika ilay tatitra.
Raha toa ka fanambarana anarana ilay izy — ampifandraiso ny matoanteny
Rehefa manome anarana rohy, ampifandraiso aminy foana ny matoanteny nilaza/nanambara/nanazava/nanoratra — ary asio rohy mankany amin'ilay nangalànao izany fitanisàna izany. Afaka manisy rohy ny teny hoe “araka ny” ihany koa ianao. Aza mitanisa fehezanteny manontolo avy ao amin'ilay lahatsoratra.
Raha mikasika ny lafin-javatra izany — ampifandraiso ny anarana
Raha toa ka maniry ny hitondra mismisy kokoa ny mpamakinao ho any amin'ny lafin-javatra hafa ianao, mampifandraisa anarana amin'ilay fehezanteny izay manakaiky indrindra ilay lohahevitra resahina.
Ohatra, raha toa ka mitanisa Fikambanana Tsy miankina amin'ny Fanjakàna izay tsy dia fantatra loatra ivelan'ny faritra misy anao ianao, afaka ampifandraisinao amin'ny anaran'ilay Fikambanana ny tranonkalany.
Raha toa ka mitanisa kolontsaina nentimpaharazana ao amin'ny fiarahamonina misy anao ianao, fa tsy maniry ny hanampy andininy feno iray hafa izay manazava ny mombamomba izany, afaka manome rohy avy ao amin'ny fampidiran'ny Wikipedia mikasika izany fomba izany ianao. Kanefa, aza adinoina fa io rohy io tsy mahasolo mandrakariva ny lafin-javatra mivantana, miankina amin'ny lanjan'izany fanontaniana manokana izany ho an'ny tantaranao, mety hangataka fanampim-panazavana avy aminao ny toniandahatsoratrao.